Ukuthengisa + UkuKhangela kwasekhaya = Wishpond | Martech Zone
NgoMvulo, Julayi 11, 2011 NgoLwesithathu, Novemba 30, 2011 Douglas Karr
Ngaphandle kwamathandabuzo ukuba i-ecommerce inefuthe elikhulu kwivenkile… kodwa nokuba iliso lakho likhulu kangakanani, ayizukungena endaweni yokuthengisa kwaye uchukumise imveliso. Kananjalo ukuhambisa simahla akusayi kuhlala kuthabatha indawo yokuphuma evenkileni kunye nento oyifunayo ngoku. Kuthe nje izolo ndathenga ijuicer eBed Bath and Beyond Ndifunde itoni ekhompyutheni malunga nabo ndaze ndanikwa nesaphulelo kwesinye seziza ... kodwa bendifuna ukugoduka ndiyokwenza iglasi yam yokuqala yesiselo semifuno ngaloo mva kwemini… ndingasibekeli bucala kangangeveki.
Isihlomelo Ndiyathemba ukuba ibe phakathi phakathi kweentengiso kunye nakwi-intanethi, ukubonelela ngeyona nto ibalulekileyo kwihlabathi. Eli inokuba lithuba elihle lokuba abathengisi babone ukuhla kwintengiso yokufumana ingqalelo kwi-Intanethi ebafaneleyo.
Ukusuka kwindawo yeWishpond:
IWishpond ifumana iimveliso ozifunayo kwiivenkile ezikufutshane nawe. Injini yokuthenga yaseWishpond ekhangela iivenkile ezikufutshane kunye neemephu ngaphandle kwezona zinto zintle kakhulu edolophini. Akusekho kuhanjiswa kulindwayo, akukho zindleko zokuhambisa. Fumana into oyifunayo namhlanje.
Iidili epokothweni yakho, naphi na apho uya khona. Iapp yethu ye-iPhone yandisa amandla akho okuthenga. Fumana usetyenziso lokulandela umkhondo weentengiso kufutshane nendawo omi kuyo, nokuba uyokuthenga ngefestile esitratweni okanye ukhangela kwintuthuzelo yekhaya.
Yenza umnqeno: fumana amaxabiso oza kuwathanda. Ngaba unqwenela ukuba uphando lwemveliso yendawo lukwenzele umsebenzi? Yenza umnqweno kwimveliso oyithandayo, kwaye iWishpond iya kukwazisa xa amaxabiso ehla, fumana iimveliso ezifanayo ezihambelana nexabiso lakho elifunekayo kwaye uthumele izivumelwano ezizezakho kwiivenkile ezikufutshane eziza kulingana nelo xabiso.
The IZiko loMthengisi weWishpond uxhobisa abathengisi bendawo ukuba babhengeze ngokulula iimveliso zabo kunye neentengiso, banike abathengi ukhetho olungcono lweevenkile zasekuhlaleni abanokukhetha kuzo.
Nantsi ividiyo emfutshane yenkonzo:
Kwaye ukuba ubunokuthandabuza ukuba ukuthengisa kuyatshintsha, nazi izibalo ezinkulu ezivela eWishpond kwi-infographic echaza apho banceda khona.
Abacwangcisi bezakhiwo kunye neB2B yokuThumela
Jul 12, 2011 ngo-5: 56 PM